Posted by မေဓာဝီ at 11:47 AM
မမေ…အခုလို သရုပ်ဖော်ပို့စ်လေးတွေ မရေးတာ တော်တော်လေးကို ကြာပြီပဲ။ ကျနော်လဲ အဲလို ပုံပြပို့စ်လေးတွေ မတင်တာ ကြာပြီ။ ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ အချိန်တွေကို ရှေ့တိုးတာ လွန်ခဲ့တဲ့ လကတည်းကလေ။ ဒါပေမယ့် မမေဆီက ပုံတွေကို ကြည့်ရတာက အဲဒီမှာ ပိုပြီး စိမ်းလန်းတာ မြန်သလိုပဲ။ ဒီမှာတော့ အခုအချိန်ထိ အဖူးလေး တဖူးနှစ်ဖူး၊ တငုံနှစ်ငုံ ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒီကြားထဲ နှင်းကလဲ မပြတ်ချင်သေးဘူး။ အခုအချိန်မှာတော့ ဒီမှာ လူတွေ သိပ်ပျော်တဲ့ နေ့ ရှိတယ်ဗျ။ အဲဒါက နေသာတဲ့နေ့လေ။ နေရောင်လေး တ၀င်းဝင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတွေ့လိုက်ရင် လူတွေက ‘Beautiful Day’ လို့ပြောတော့တာပဲ။
4/04/2008 2:50 AM
နှစ်သစ်တွေအတွက်... ပိတောက်တွေနဲ့အတူ... ဝေဆာလန်းဆန်းနိုင်ပါစေ မမရေ...
I came and read your posts from time to time. Never leave the comment b4 as well as not messages that you dont have Cbox.
Keep it up and nice to know you. I'd like to invite you back. Thanks..,
4/06/2008 4:43 PM
မေရေ...ဒက်ဖိုဒေးလ် ပန်းလေးတွေကချစ်စရာနော်။ လှပလန်းဆန်းတဲ့ နေရောင်အောက်မှာ မေတယောက် ပန်းလေးလို လန်းဆန်းအေးမြပါစေလို့။
4/07/2008 2:07 AM